आफ्नो पेन्टी र ब्रा राम्रोसँग नधोएको भन्दै पतिसँग डिभोर्स « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
आफ्नो पेन्टी र ब्रा राम्रोसँग नधोएको भन्दै पतिसँग डिभोर्स
१८ पुस २०७६, शुक्रबार ००:००
संसारमा दिनप्रतिदिन अनौठा घटनाहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । जुन सुन्दा कोही अचम्ममा पर्छन्, त कोही मुर्छा परेर हास्छन्, भने कोही रुने पनि गर्दछन् ।
यस्तै एक अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ, जुन थाहा पाउँदा आश्चर्य मान्नुको विकल्प हुनेछैन ।
आफुले लगाएको ब्रा र पेन्टी राम्रोसँग नधोएको भन्दै श्रीमानसँग डिभोर्स नै गरेकी छन् ।
घटना विश्वासै गर्न गाह्रोपर्ने जस्तो छ । तर महिला आफैले सोसल मिडियामा शेयर गरिसकेपछि विश्वास गर्नैपर्यो । ती महिलाका अनुसार उनका लोग्नेले अल्छी नमानीकन दुबैजनाका कपडा धुने गर्दा रहेछन् ।
लोग्नेको यस्तो सहयोगी बानी सुरुमा त ती महिलालाई निकै मन पर्यो । उनले लोग्नेको प्रसंसा खुबै गर्थिन् । तर जब उनका पतिले भित्री वस्त्र समेत वासिङ मेसिनमा हालेर धुन थाले तब विवाद सुरु भयो ।
भित्री वस्त्रलाई वासिङ मेसिनमा हालेर धुनाले लुगा छिटै फाट्ने भन्दै उनले लोग्नेलाई भित्री वस्त्रहरु धुनका लागि मेसिनमा नहाल्न भनिन् ।
हातैले धुनुपर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा ट्यागमा लेखेका भित्री वस्त्रसमेत आफ्नो लोग्नेले वासिङ मेसिनमा हालेर धुन थालेपछि उनको रिसको पारो तात्यो ।
उनले लोग्नेलाई धेरै सम्झाइन् त्यसो नगर्नका लागि । तर उनका पति मान्नेवाला थिएनन् । जसका कारण उनले आफ्ना लोग्नेसँग डिभोर्स गर्ने निधो गरिन् ।
पति पत्नीबीच झैझगडा हुँदा, मन नमिल्दा तथा पतिले राम्रोसँग पालन पोषण नगर्दा पति पत्नीबीच डिभोर्स हुने गरेको त थाहा भएकै कुरा हो ।
तर यो दुनियामा केही महिला यस्ता पनि हुँदा रहेछन् जसले लोग्नेले बढि माया गर्दा पनि डिभोर्स माग्दा रहेछन् । पत्यारै नलाग्ने यो घटना युएइको हो ।
ती महिलाले आफ्नो लोग्नेसँग डिभोर्स माग्दा यस्तो कारण उल्लेख गरेकी छिन् कि त्यो सुन्दैमा अनौठो लाग्दछ । लोग्नेले आफुलाई आवश्यकता भन्दा धेरै माया गरेको उनको आरोप छ ।
एक वर्षअघि विवाह गरेकी ती महिलाले हालै अदालतमा डिभोर्सका लागि निवेदन दिइन् । लोग्नेले आफुलाई चाहिने भन्दा धेरै प्रेम गरेको र आफुलाई बढि प्रेम मन नपर्ने उनको तर्क छ ।
अदालतमा भएको बहसका क्रममा उनले इजलासमा भनेकी छिन्, ‘मेरो पति न त म सँग झगडा गर्छन्, न त मलाई कहिल्यै चिन्तित हुन दिन्छन् । लोग्नेले आफुलाई अत्यन्तै धेरै माया गर्दा म वाक्क भएँ र प्रेमकै कारण मेरो जिवन नर्क बन्यो । त्यसैले मैले डिभोर्स गर्ने निर्णय गरेकी हुँ ।’
लोग्नेको अत्यधिक प्रेम र स्नेहबाट आफु प्रताडित भएको उनको भनाई छ । बिहे भएको एक वर्षमा एकपटक पनि झगडा हुन नपाएको उनले बताएकी छिन् ।
डिभोर्स सम्बन्धी अनौठा कानुन, सुन्दैमा तिनछक परिन्छ
पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् डिभोर्स आफैमा अपि्रय घटना हो । डिभोर्सको विषयमा दुनियाका विभिन्न देशमा विभिन्न खाले चलन तथा नियम कानुन रहेका छन् ।
कतिपय देशहरु डिभोर्सका मामिलामा बढि महिलामैत्री छन् भने कतिपय देशहरुले पुरुषलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छन् । बेलायती अनलाइन मेट्रो डट को डट युकेका अनुसार डिभोर्स सम्बन्धी विश्वका केही अनौठा नियम कानुन यस्ता छन्ः
· साउदी अरबमा यदि कुनै महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई हरेक बिहान मिठो कफी बनाएर खुवाइनन् भने श्रीमानले उनलाई तलाक दिन पाउँछ ।
· चीनको एक पुरानो कानून अनुसार कुनेपनि महिलालाई आफ्नो श्रीमानले धोका दिइरहेको लागेमा डिभोर्स गर्ने हक छ । यतिमात्र होइन धोका दिएको वा परस्त्रीसँग लागेको देखेमा हत्यासम्म गर्ने छुट पुरानो कानूनले दिएको थियो । नियम यस्तो थियो की धोकेबाज श्रीमानको हत्यामा कुनै हतियारको प्रयोग गर्न पाइन्नथ्यो ।
· समोआमा यदि पतिले आफ्नी पत्नीको जन्मदिनको शुभकामना दिन भुल्यो भने सकस पर्यो । आफुलाई बर्थडे विस नगर्ने लोग्नेलाई डिभोर्स दिने हक समोआका महिलामा सुरक्षित छ ।
· अमेरिकाको कन्सासका कतिपय क्षेत्रमा पुरुषलाई आफ्नी श्रीमतीकी आमासँग पनि शारीरिक सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ । यसो नगर्ने पतिलाई उसकी श्रीमतीले डिभोर्स दिन पाउँछे ।
· कुवेतमा यदि कोही पुरुषले महिलालाई घुरेर हेर्यो भने जेलको हावा खानुपर्छ । यतिमात्र होइन कुनै पुरुषले पोथी जनावरलाई पनि यौनभावनाले हेर्यो भने उसलाई समेत जेल सजाय हुन्छ ।
· अस्ट्रेलियामा यदि कोही आदिवासी महिला आफ्नो पतिसँग अलग हुन चाहेमा पतिलाई मनाउने कोसिस गर्न सक्छन् । वा तुरुन्तै कुनै दोश्रो पुरुषसँग बिहे गरेर आफ्ना पहिलो दाम्पत्य सम्बन्धलाई टुंगाउन सक्दछन् ।
· अमेरिकाको कोलोराडोमा पहिले यस्तो कानुन थियो की आइतबार आफ्नो इच्छा विपरित सेक्स गर्न चाहने पतिलाई पत्नीले जेल हाल्न सक्थिन् र डिभोर्स दिन सक्थिन् । आइतबार विदाको दिन आराम गर्ने दिन भएकाले सम्भोगका लागि कर गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता भएर होला ।
प्रकाशित मिति: Jan 3, 2020
यो संसारमा पनि अच्चमका मानिस बस्ने गर्छ । भनिन्छ रिस छठे पछि मानिसले जेपनि गर्न
आफ्नो बुवाआमाको इच्छा पुरा गर्न छोरीले २० प्रमी बनाएपछि…!
हरेका आमाबुवाको सपना हुन्छ आफ्नो सपना सन्तानले पुरा गरोस् अनि हरेक छोराछोरीको सपना हुन्छ पुरा
थाहापाउनुहोस् : आफ्नै दाजुभाई र दिदीबहिनीसँगै जान नहुने यो शिव मन्दिर !
यो संसार प्रमेश्वरले सृष्टि गर्दा खेरिनै विविधता बनाउनु भएको छ । यो ससांर पनि कति
यी तीन राशी भएका युवतीसँग पहिलो भेटमै हुन्छन् पुरुष फिदा !
पूर्वीय दर्शनलाई फलो गर्ने जोकोहीले पनि ग्रह र राशीलाई विश्वास गर्ने गर्छन् । अझ हिन्दु
थाहापाउनुहोस् : लागुऔषध माफियालाई हत्या गरे सरकारले इनाम दिने यस्तो देश !
हरेक देशको आ-आफ्नो नीतिनियम हुने गर्दछ । कति नीतिनियम हामीलाई सुन्दा पनि अच्चम लाग्ने गर्छ
भान्जाले आफ्नै माइजुलाई भगाएपछि …!
भनिन्छ माया अन्धो हुन्छ । मायाले नाता, जात, धर्म र उमेर केहि भन्दैन । यस्तै